Tirokoobku waa sida ay dawladdu ku ogaato tirada dadka ku nool wadankaan. Sharciga Tirokoobka wuxuu Madaxweyne George Washington iyo kuwo kale saxiixeen taariikhdu markay ahayd March 1, 1790. Tirokoobkii ugu horreeyey waxaa la qabtay August 2 isla sanadkaas. Iyadoo uu maamulayo Wasiirkii Arrimaha Dibedda Thomas Jefferson ayaa Tirokoobkaas waxaa laga hirgeliyey 13 gobol iyo dhulalkii Kentucky, maine, Vermont iyo Dhulkii Koonfur Galbeed (Tennesee).
MACLUUMAAD NOOCEE AH BAA
LAGU XUSAA TIROKOOBKA?
Ujeedada Tirokoobku waa in la ogaado tirade dadka ku nool Meraykanka taariikhdu markay tahay April 1, 2020. Foomamka tirokoobka waxaa boostada loogu diri doonaa guri kasta oo ku yaal Mareykanka. Qofkasta oo gurigaas ku nool waa in tirade lagu daro. Waana in la sheego midabka, da’da, jinsiyadda iyo xiriirka ka dhexeeya qofka foomka buuxinaya iyo dadka gurigaas ku nool.
MAXAA DHICI KARA HADII AADAN BUUXIN FOOMAMKA TIROKOOBKA?
Tirokoobku wuxuu xaqiijinayaa jiritaankeena. Hadii aan lagu tirin, xisaabta kuma jirtid. Hadii aadan xisaabta ku jirin macnaheedu waa inaadan helayn wixii uu dadkaagu xaqa ugu lahaa dawladda. Ka qeybgalkaaga Tirokoobku waa mid muhiim ah.